PVC ထည်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖောက်တံတံခါးကိုဖွင့်ခေါက် China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ပွတ်ဆွဲကူးပြောင်းမှုနှင့် stack တံခါးစနစ်ပြင်ပတံခါး,ကာကွယ်ပေးနိုင်အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး,တံခါး Track Stacking
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack တံခါး > PVC ထည်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖောက်တံတံခါးကိုဖွင့်ခေါက်
Infilling Material: Foam, Aluminium Silicate
လက်မှတ်: CE; SGS; ISO9001;TUV
HS Code ကို: 73083000
ဆိပ်ကမ်း: Shenzhen Port,Guangzhou Port
သူအမြန်တံခါးကို stacking T ကထိုကဲ့သို့သောအပူထိန်းသိမ်းခြင်း, အအေးထိန်းသိမ်းခြင်း, အင်းဆက်ပိုးမွှားသက်သေပြ, windproof, dustproof နှင့် soundproof အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်, ကားရပ်နားအများကြီး, စက်မှုဇုန်အပင်, အစားအစာ, အထည်အလိပ်, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပိုးမြေအောက်မော်တော်ကားပရိသ, တိကျစက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာ high-performance ကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးအလုပ်ရုံနှင့်တွေ့ဆုံရန်စွမ်းအင်ကယ်တင်နှင့်လေအေးပေးစက်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ high-speed ကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်ပွဲနှင့်ပိတ်ပွဲ, အလုပ်ထိရောက်မှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ အစာရှောင်ခြင်း stack တံခါးများပိုကြီးတဲ့တံခါးရွက်နှစ်ရွက်အဘို့အသင့်လျော်ဖြစ်ကြပြီး 10 ဒီဂရီအထက်လေတိုက်နှုန်းကိုဆီးတားနိုင်။
1 ။ air ကိုပြွန်
ကုလားကာအဆိုပါပူးတွဲလေတိုက်ခုခံအကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့သံမဏိပိုက်သို့မဟုတ်လူမီနီယံအလွိုင်းလေတိုက်ခြင်းနှင့် windproof ချွတ်တပ်ဆင်ထားသည်။
2. Ring ကို
ဒါဟာသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိနှင့်အတူပန်းချီနဲ့လှပတဲ့ဖြစ်ပါသည်, အကြမ်းခံများနှင့်ယဉ်ပါးဝတ်ဆင်ထားသည်။ အဆင့်မြင့်ဂဟေနည်းပညာကိုသုံးပြီး, ပစ္စည်းကျိုး, desold ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး, တာရှည်ခံဖြစ်ပါသည်
built-in ဖြီးလမ်းညွှန်ရထားလမ်းပေါ်တွင် dustproof နှင့်တံဆိပ်ခတ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားနိုင်ပါတယ်။
အလယ်မှာကဘေးကင်းယာဉ်များနှင့်မော်တော်ယာဉ်များထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ထွက်ပေါက်ရန်အဘို့အအောင်, 1.2mm တစ်ဦးအထူနဲ့အလျားလိုက် PVC ပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်နှင့်အတူပေးအပ်သည်။
တင်ပို့မတိုင်မီ pre-ထုတ်လုပ်မှုသိုက်, ဟန်ချက်။
သာမန်အမိန့်သည်ခန့်သာ7ရက်ကြာပါတယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်တံခါးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် 12 လအာမခံကိုဆက်ကပ်။ ဘယ်အချိန်မှာထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
4. OEM န်ဆောင်မှုကိုသင်ပူဇော်ကြသလော
ဟုတ်ပါတယ်။ OEM နှင့်လိမ္မော်ရောင်န်ဆောင်မှုသည်ငါတို့အဘို့အဘယ်သူမျှမကပြဿနာရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ကနမူနာအမိန့်အဖြစ် 1 set ကိုလက်ခံပါ။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack တံခါး
မြန်နှုန်းမြင့်အပြင်ဘက်တံခါးကို stacking အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
High Quality မြန်လိပ်ခေါင်း Up ကို stack ဂိုဒေါင်တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကားဂိုဒေါင်အမြင့်မြန်နှုန်း stack တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းလုံခြုံရေး stack တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးအမြင့်မြန်နှုန်း stack တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုလေတိုက်နှုန်းမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း stack တံခါးကိုတှနျးလှနျ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Rapid ကြိတ်စက် Shutter stack တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အချင်းပြည့်မီမှာ Automatic အမြင့်မြန်နှုန်း stack တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပွတ်ဆွဲကူးပြောင်းမှုနှင့် stack တံခါးစနစ်ပြင်ပတံခါး ကာကွယ်ပေးနိုင်အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး တံခါး Track Stacking ပွတ်ဆွဲကူးပြောင်းမှုနှင့် stack တံခါးစနစ် မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးကိုယ်ပိုင်နာလန်ထူ PVC ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပြင်ပတံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးဒီဇိုင်း Up ကိုခေါက် မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး Servo စနစ်များ